Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Phil Jones, Dan Burn, Denis Zakaria, Stefano Sensi, Paul Pogba | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Phil Jones, Dan Burn, Denis Zakaria, Stefano...
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Phil Jones, Dan Burn, Denis Zakaria, Stefano Sensi, Paul Pogba
Daafaca Manchester United Phil Jones ayaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo bartamaha xilli ciyaareedkaan France, iyadoo kooxda Ligue 1 ka dhisan ee Bordeaux lagu soo waramayo inay isha ku heyso daafaca dhexe. Goal
Newcastle United ayaa si aad ah u horumarisay dalabkii ugu horeeyay ee 7 milyan ginni ee ay ku doonaysay xidiga kooxda Brighton & Hove Albion ee Dan Burn Sida laga soo xigtay The Chronicle.
Juventus ay si degdeg ah ugu dhaqaaqday saxiixa xiddiga kooxda Borussia Monchengladbach ee Denis Zakaria. Sida ay qortay Goal
Inter Milan ayaa xaqiijisay in Stefano Sensi uu dhamaystiray heshiis amaah ah oo uu ugu biirayo Sampdoria inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Inter Milan fc
Paul Pogba ayaa sii joogi doona Manchester United wixii ka dambeeya xagaaga haddii Ralf Rangnick uu sii ahaado tababaraha. Sida laga soo xigtay The Sun ,
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay kula dagaalanto Real Madrid saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. sida laga soo xigtay Mundo Deportivo
Everton ayaa lagu soo waramayaa in ay Crystal Palace kula dagaalamayso saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Donny van de Beek ka hor inta uuna xidhmin suuqa kala iibsiga January. sida laga soo xigtay Sky Sports News
Agaasimaha kooxda Barcelona Mateu Alemany ayaa lagu soo waramayaa in uu kooxda kula taliyay in aysan u dhaqaaqaanin saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Man City ee Raheem Sterling inta lagu guda jiro suuqa January.
AMNIGA DOORASHOOYINKA OO AAD LOO ADKEEYAY
Xildhibaanada kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo qarka u saaran iney ka...
Ruushka oo dalkiisa ka mamnuucay Boris Johnson digniintii ugu adkaydna u...
Ra’iisul Wasaare Rooble ma joojin doonaa ciidanka laga soo wado Eritrea...
Axmed Karaash oo la wareegay awoodii Siciid Deni. Gunta khilaafka labada...
QM oo baareysa markab Turkish ah oo lagu arkay xeeb ay...
Weeraryahanka kooxda Roma Tammy Abraham oo lala xiriirinayaa kooxda Manchester United